Wacaal Daray ah: Maleeshiyo Galmudug oo Ballibusle Maato ku Dhaawacay – Radio Daljir
Agoosto 31, 2017 7:17 g 0
Warar hadda naga soo gaaray maagaalada Ballibusle oo dhacda bariga Gaalkacyo, soona gaaray warqabadka Daljir daqiiqado kahor, ayaa sheegaya in deegaanka ay soo weerareen maleeshiyo hubaysan oo ka soo tallaabtay koonfurta Mudug.
Illaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in dableyda Galmudug ay degmada Ballibusle ku dhaawaceen haweeney xaamilo ah oo uur 9 bilood sidda iyo wiil aan da’diisa weli la sheegin. Wararku waxay intaas ku darayaan in isla markiiba laga hortagay dableyda weerarka ahayd, laakiin aan weli la sugin khasaaraha gaaray.
Warka oo faahfaahsan iyo waraysiyo kala soco Radio Daljir.
Ciida Ciid Wanaagsan ku Ciida oo Ciid Al Adxa Barakaysan Ciida!